Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Isniin Ah Ka Qoreen Wargaysada Yurub. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 24, 2019 at 09:29 Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Isniin Ah Ka Qoreen Wargaysada Yurub.2019-06-24T10:29:19+01:00 CAYAARAHA
Difaaca Leicester City ee Harry Maguire ayaa noqon doona difaacii abid ugu qaalisanaa taariikhda kubbada cagta isaga oo £80 milyan gini ugu biiraya Manchester City isaga oo todobaadkii mushaar ahaan Etihad Stadium uga qaadan doona £280,000-kun oo gini.
Samuel Eto’o ayaa gool dhaliyaha Liverpool ee Mohamed Salah ku dhiiro galiyay in uu iskaga baxo kooxda horyaalka Yurub haysata ee Reds isla markaana uu ku biiro Barcelona haddii uu doonayo in uu noqdo xidiga aduunka ugu fiican.
Arsenal ayaa laga soo diiday dalabkii labaad ee ay ka gudbisay difaaca midig ee kooxda Celtic ee Kieran Tierney iyada oo Celitc ku adkaysatay in 25 milyan gini wax ka yar ayna xidigan ku fasixi karin.
Real Madrid ayaa xiiso lama filaan ah ka muujisay xidiga suuqa kala iibsiga kooxda Newcaslte United ugu qaalisan ee Miguel Almiron kadib markii uu Copa America bandhig fiican ka sameeyay waxayna ku iibsan karan 35 milyan gini.
Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa si shaqsi ah waxa uu gudoomiye ku xigeenka kooxdiisa ee Ed Woodward uga baryay in uu dardar galiyo dhamaystirka xidiga 70 milyan yuro lagu qiimaynayo ee Bruno Fernandes kaas oo ka tirsan kooxda Sporting Lisbon.
Manchester United ayaan wali ka quusan in ay dariskeeda Mancheser City ku garaaci karto saxiixa Harry Maguire inkasta oo la sheegay in xidiga reer Engalnd uu City u wareegayo.
Gool dhaliyaha kooxda Manchester City ee Leroy Sane ayaa iska diidi doona kooxda dalkiisa Jarmalka ugu awooda badan ee Bayern Munich iyada oo la filayo in uu saxiixi doono heshiis cusub oo Man City ku sii hayn kara.
Heshiiskii cusbaa ee uu Man United u saxiixay Juan Mata waxa uu kaga tanaasulay £45,000-kun oo gini oo uu todobaadkii ka qaadan jiray Old Trafford isaga oo mushaar dhimid wayn sameeyay.
Manchester United ayaa markale ku dhiboonaysa in ay xal u hesho heshiis kordhinta Marcus Rashford waxayna hadda go’aan ku gaadhay in ay dhaqan galiso kordhinta heshiiska da’yarkan oo 12 bilood ay doorasho u haysteen si aanu markiiba kooxda uga bixi karin.
Tababarhaa Arsenal ee Unai Emery ayaa boodka kooxdiisa ka dalbaday in ay baanka u jabiyaan saxiixa xidiga kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha, kaas oo ay ugu yaraan ku heli karaan £55m.
Manchester United ayay ka go’antay in ay kooxdooda u magacaabaan agaasime ciyaareed si uu Ole Gunnar Solskjaer uga caawiyo dib u dhiska kooxda Red devils.
Kooxaha Inter Milan iyo Manchester United ayaa wali isku afgaran waayay qiimaha Romelu Lukaku iyada oo uu jiro farqi £20 milyan gini ah oo labada kooxood u dhexeeyaa waxayna United ku doonaysaa £75m.
Goolhayihii hore ee Manchester city iyo xulka England ee Joe Hart ayaa dib ugu soo laaban kara tartanka UEFA Champions league kadib markii uu xiiso ka helay kooxda Lille oo tartankan u soo baxday.
Riix 2 si aad u sii akhrisato wararka kale ee suuqa iyo wargaysyada Yurub
« Wada-hadaloo u dhexeeya xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo berri ka furmaya magaalada Nairobi
DEG-DEG: Maamulka Chelsea Oo Go’aan Ka Gaadhay In Frank Lampard Uu Noqdo Badalka Maurzio Sarri. »